The Irrawaddy's Blog: ဇနီးသည်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကိစ္စ ဦးရဲထွဋ် တောင်းပန်ပြီ
ဇနီးသည်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကိစ္စ ဦးရဲထွဋ် တောင်းပန်ပြီ
သမ္မတ ပြောခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သူ့ဇနီးရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ပို့စ်တခုကို ပြန်ရှယ်မိတဲ့အတွက် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာက တဆင့် အခု လို တောင်းပန် လိုက်ပါပြီ။ အဲဒီကိစ္စဟာ အွန်လိုင်းလောကမှာ လူပြောများနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ တောင်းပန်စာကို သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ကူးယူဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Facebook သုံးတဲ့အခါ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေရှိပါတယ်။ အခြားသူတင်ထားတဲ့ ပို့စ်များကို မျှဝေမယ်၊ နှစ်သက်ကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခုိုက်မှုတွေ၊ အမုန်းတရားပွားစေတဲ့
ပြောကြားချက်တွေ ပုံတွေ မဖြစ်ဖို့ သတိပြုရပါတယ်။ မိမိရေးတဲ့စာများဟာလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခုိုက်မှု၊ အမုန်းတရား ပွားစေတဲ့ ပြောကြားချက် မဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော့ဇနီးရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ မနေ့က မျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တုိုက်ခုိုက်ရာရောက်တဲ့ ဓာတ်ပုံ ပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုရာမှာ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်များနဲ့လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရက်တစ်စံနှုန်းများနဲ့လည်းကောင်း လွဲချော်နေတဲ့အတွက် သိသိချင်း
ကျွန်တော်ဟာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးအနေနဲ့လည်းကောင်း၊ အိမ်ထောင်ဦးစီးအနေနဲ့ လည်းကောင်း မိမိ မိသားစုဝင်များရဲ့ အပြုအမှုများကို အများလိုက်နာတဲ့ စံနှုန်းများနဲ့အညီ ဖြစ်အောင် သွန်သင်ဆုံးမဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။
အဲဒီတာဝန်ကို ကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်နုိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လည်းကောင်း၊ သူ့ကို ချစ်မြတ်နိုး ထောက်ခံသူများကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော့် စာမျက်နှာ ကို အလေးထားလာရောက်ဖတ်ရှုသူများကိုလည်းကောင်းတောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးအနေနဲ့လည်း ဒီဖြစ်စဉ်ကနေ သင်ခန်းစာရခဲ့ပြီးလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ တယ်။
"သမ္မတ ပြောခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သူ့ဇနီးရဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ပို့စ်တခုကို ပြန်ရှယ်မိတဲ့အတွက် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာက တဆင့် အခု လို တောင်းပန်"
= (original uploader-ဦးရဲထွဋ်ဇနီး ၊ ပြန်ရှယ်သူ-ဦးရဲထွဋ် ၊ တောင်းပန်သူ-ဦးရဲထွဋ်)
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ထားတဲ့ ပို့စ်တခုကို သူ့ဇနီးက ပြန်ရှယ်မိတဲ့အတွက် သမ္မတ ပြောခွင့်ရ ပြန်ကြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာက တဆင့် အခု လို တောင်းပန်"
=(original uploader-someone else ၊ ပြန်ရှယ်သူ-ဦးရဲထွဋ်ဇနီး ၊ တောင်းပန်သူ-ဦးရဲထွဋ်)
မြန်မာဝက်ဆိုဒ်တွေအများစု သမာသမတ်ရှိရှိလုပ်ပါ။ မလိမ့်တပတ် ယုန်ထင်ကြောင်ထင် ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနှင့်။နေရာတိုင်းတွင်ပါ။
(မစ္စတာ ဖာတစ်ရာကို ဖာပေးခြင်းမဟုတ်)
အလွန်အကျွံအခွင့်ထူးခံခွင့်ရပြီး၊အနေချောင်၊အစားချောင်နေလို့ ဗိုလ်နေမြဲကျားနေမြဲနေလိုတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ သူတို့ ဇနီးသားမယားတွေဟာ မတရားရယူထားတဲ့သူတို့ ရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာ၊ အာဏာတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ (၂၀၀၈)နာဂစ်ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖြစ်နိုင်သမျှမပြင်ခြင်ကြဘူး။
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအသိနိုးကြားမှု့ရေချိန်မြင့်လါတါနဲ့ အမျှအရှိန်ရလာတဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတောင်းဆိုမှု့တွေကိုအာရုံလွှဲနိုင်တာဟာထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ဘာသာရေးနဲ့ လူမျိုးရေးကိစ္စဘဲမဟုတ်လါး။ အထူးသဖြင့်ရာစုနှစ်ဝက်ကျော်စစ်ဖိနပ်သံခွါအောက်မှာပြားပြားမှောက်နေခဲ့ရလို့အတွေးအခေါ်အသိအမြင်နောက်ကျန်ရစ်တဲ့ပြည်သူတစ်ချို့ကိုလွယ်လင့်တကူလမ်းမှားပို့ နိုင်တာလည်း ဘာသာရေး နဲ့ လူမျိုးရေးကိစ္စဘဲမဟုတ်လါး ။
လူဆိုတာကိုယ်ရပ်တည်တဲ့ဖက်က၊ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားရှိတဲ့ဖက်ကိုအမှန်တရားလို့ ယုံကြည်ခြင်ကြတယ် ။ အတ္တအမှောင်ဖုံးပြီဆိုရင်အမှန်နဲ့ အမှားကိုခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။သေခြာတာတစ်ခုကတော့အချုပ်အချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအပါအ၀င် တို့ အရေးသုံးပါးနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာနိုင်ငံဟာ စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး၊စာရိတ္တနဲ့ လူမှု့ရေးရှိရှိသမျှကဏ္ဍတိုင်းချွတ်ခြုံကျပြီးပြည်သူအများစုကြီးဘ၀ဟာဆင်းရဲတွင်းအနက်ဆုံးရောက်ခဲ့ရတာဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်အောင်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်နေရပြီ ။
ဒီလောက်ထင်ရှားနေတာတောင်မျက်စိမှိတ်ပြီးပြည်သူတွေမနှစ်မျို့တာသိရက်နဲ့ ဘယ်သူကမှတာဝန်မပေးဘဲနိုင်ငံကောင်းဖို့၊တိုင်းပြည်ကာကွယ်နေရတာပါလို့ အကြောင်းပြပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျားကန်ပေးထားတဲ့ (၂၀၀၈)ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုထိထိရောက်ရောက်မပြင်ဘဲပေကပ်ဒရွတ်ဆွဲနေရင်တော့သမိုင်းဆိုးသမိုင်းညစ်ထဲမှာလူစုတ်လူညစ်တွေရယ်လိုကမ္ဗည်းထိုးရစ်ဘ၀ကြွေးနွှံနစ်အုံးတော့မှာပါ ။
ချီးကျလာမှပျော်၊ ချီးကျလာမှာမျှော်တဲ့ ချီးတွင်းထဲကလောက်ကို ချီးကြောက်တရားဟောလည်း ချီးကြောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုရေးကြပေတော့ ။
Dear Nyi Nge,
I am proud of you. You have shownagood example.
Electronic Law ကဘယ်ရောက်သွားလဲ
မီဒီယာ က ဘက်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။စာမတတ်တာပါ။
ဒီလို အမှားတွေ တွေ့တာ များပေါ့ ။ အဲလိုစာ မတတ် ပဲ နေရာ တကာ မှာ ငါသတင်းထောက်ကွ
ဂျာနယ် ထဲ ထည့်လိုက်မယ် ဆိုပြီး ဟောက်စား လုပ်တာ တွေကို ရွှံလွန်းလို့
Myanmar နဲ့Burma စကားလုံး အသုံး အငြင်းပွားတဲ့အခါ ကိုးကားချင် ကိုးကားနိုင်ဖို့ဒီပို့ စ်ကို တင်ပါတယ်။ ဘီဘီစီမှာ လွှင့်သွားပြီးသားကို ဒီက ...